My2days Jail Experience in Switzerland | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on October 6, 2015 October 6, 2015 by Nu Myat
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မ အကျဉ်းထောင်ထဲ၊ အကျဉ်းခန်းထဲ နှစ်ညတာ ကုန်ဆုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်မှ နယ်နယ်ရရ အကျဉ်းထောင် မဟုတ်ဘူးနော်။ Switzerland နိုင်ငံက အကျဉ်းထောင်ထဲမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်လို့လည်း မဟုတ်၊ အကျဉ်းကျခံရလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ Tourist တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ။ Tourist အနေနဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲ ၀င်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတော့ နားရှုပ်သွားမယ် ထင်တယ်နော်။ သူများနိုင်ငံသွားပြီး မဟုတ်တာ ဘာသွားလုပ်ခဲ့လို့လည်း ဆိုပြီးလည်း တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့။ ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါ။
၂၀၁၀ခုနှစ် သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်တုန်းက ပိတ်ရက်ရှည်ရတာနဲ့ ပြည်ပခရီးထွက်လေ့ရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ မိသားစု ဥရောပ ၅နိုင်ငံကို ၁၀ရက်တာ ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို ရန်ကုန်ကနေ Package Tour ၀ယ်ပြီး သွားလေ့ရှိပေမဲ့ အဲဒီနှစ်မှာတော့ အသစ်အဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင် ကိုယ့်အိတ်ကိုယ်ဆွဲပြီး Backpacking Tourist တွေလိုသွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပနိုင်ငံတွေအနှံ့ ပြေးဆွဲတဲ့ Eurorail ရထားတစ်ခုပြီး တစ်ခုပြောင်းစီးပြီး တစ်နိုင်ငံဝင် တစ်နိုင်ငံထွက် ချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။ အသိ Tour Company တစ်ခုက သွားမယ့်နိုင်ငံတွေ အလိုက် Hotel တွေ ကြို Booking လုပ်ပေးထားပြီး Booking လုပ်ပေးထားတဲ့နေ့တွေအလိုက် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေက သက်ဆိုင်ရာ Hotelတွေ ဆီရောက်အောင် သွားခဲ့ရတာပါ။
Lake Lucerne လှပလွန်းတဲ့ လူဆင်းမြို့လေး
Train station of Lucerne, Switzerland လူဆင်းဘူတာ
ဆွဲထားတဲ့ ခရီးစဉ်အရ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ ကို လေယာဉ်ဆိုက်ပေမဲ့ ပဲရစ်ကို နောက်ဆုံးမှ လည်မယ်ဆိုပြီး ဆွစ်ဇာလန်ကို ခရီးမရောက်မဆိုက် ရထားနဲ့ဆက်ပြီးထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ အေးချမ်းတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ ဖြစ်တဲ့ လူဇင်း (Lucerne) မြို့ကိုပါ။ လမ်းမှာ စိမ်းစိုလှပရှင်းသန့်တဲ့ ဆွစ်ဇာလန်ရှုခင်းတွေခံစားရင်း ဥရောပခရီးစဉ်ကို စခဲ့ကြတာပေါ့။ လေယာဉ်တွေ အဆင့်အဆင့်စီးပြီး ကားတစ်တန် ရထားတစ်တန်နဲ့ ခရီးနှင်ခဲ့ရတော့ လူဆင်းမြို့ ရောက်ရင် တစ်ဝကြီး အနားယူပစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး ကျွန်မတို့ အားလုံး အားခဲထားကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း လူဆင်းလည်းရောက်ရော ခဲလေသမျှ သဲရေကျခဲ့ရပါတယ်။
လူဆင်းဘူတာမှာ ရထားလည်းဆိုက်ရော စီစဉ်ထားတဲ့ Hotel ကို သွားဖို့ စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါ ဘူတာဝန်ထမ်းက နီးနီးနားနား လမ်းလျှောက်သွားရုံနဲ့ ရောက်တယ်ဆိုပြီး မြို့မြေပုံပေါ် လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မတို့လည်း ကိုယ့် Luggage ကိုယ်ဆွဲပြီး ဟိုတယ်ရှာပုံတော် ဖွင့်ခဲ့ကြတာပေါ့။ Lucerne မြို့လေးက သေးတဲ့ အပြင် မြို့လည်က ရေကန်ကို အခြေခံပြီးဖွဲ့ စည်းထားတော့ Taxi ဌားရင်တောင် မရနိုင်ပါဘူး။ Taxi အလွန်ရှားပါတယ်။ မြေပုံအရ ရေကန်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး တစ်ဖက်ကမ်းရောက်အောင် အထုပ်တွေအပိုးတွေသယ်ကာ မနည်းသွားရပါတယ်။ ဒီကြားထဲ လမ်းတွေမှားပြီး ဟိုတယ်ကလည်း ပျောက်နေတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ မြေပုံမှာပြထားတဲ့နေရာ ရောက်နေပေမဲ့ ဟိုတယ်နဲ့ တူတဲ့အရိပ်အယောင်တောင် မတွေ့ရပါဘူး။ ဥရောပနယ်မြို့ လေးတွေမှာ ညနေဘက်တွေ အေးလို့ အပြင်ထွက်လေ့မရှိတာကြောင့် လမ်းမေးရမယ့် ဒေသခံတွေလည်း တစ်ယောက်မှ မတွေ့ရပါဘူး။
လမ်းပျောက်လည်းရောက်တဲ့နေရာမှာ ရိုက်တာပဲ 🙂
ဒါနဲ့ ဟိုတယ်နာမည်နဲ့လိပ်စာ အရ ရောက်နေတဲ့ အဆောက်အအုံထဲ ၀င်မေးကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှ ဒါကျွန်မတို့တည်းရမယ့် ဟိုတယ် ဖြစ်နေတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ ဟိုတယ်ပုံလည်းမပေါက် ဆိုင်းဘုတ်လည်းမတပ်ထားတော့ ကျွန်မတို့မျက်စိလည်နေတာပါ။ ဟိုတယ်မှ ဘုရားစူးဟိုတယ်ပါ။ ဟိုတယ်နာမည်ကိုက Jail Hotel တဲ့လေ။ အရင်က အချုပ်ထောင်ကို ဟိုတယ် အဖြစ် ပြန်ဖွင့်ထားတာမှန်း နောက်မှ တဖြည်းဖြည်း သိလာရတာ။ တည်းခိုသူတွေ အကျဉ်းထောင် ရောက်နေသလို ခံစားရအောင် ဟိုတယ်ခန်းတွေကို အရင် အချုပ်ခန်းတွေ အတိုင်းပဲ ထားထားတာတဲ့။
Jail Hotel မျက်နျာစာ
အခန်းကျဉ်းကျဉ်းထဲ ပရိဘောဂဆိုလို့ နှစ်ထပ်ကုတင်နှစ်လုံး သစ်သားကုလားထိုင် တစ်ခုံပဲ ပေးထားတယ်။ ရေချိုးခန်းအိမ်သာ တွဲရက်ပါပေမဲ့ တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာ အကျဉ်းဆုံးပါပဲ။ မီးလုံးကလည်း အ၀ါရောင် မီးသီးမှိန်မှိန်တစ်လုံးပဲ ထည့်ပေးထားတော့ ကျောချမ်းစရာပေါ့။ အခန်းတံခါးတွေကိုလည်း ၂ထပ်တံခါးအဖြစ် အကျအနခတ်ထားလို့ထောင်သဏ္ဍာန်ပို ပီပြင်စေပါတယ်။ ကော်ရစ်ဒါမှာကအစ ထောင်သမိုင်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ထောင်ဝတ်စုံတွေ၊ ထောင်တွင်းသုံး လက်နက်ကိရိယာတွေကိုပါ ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။
နောက်ထူးဆန်းတာတစ်ခုက ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းဆိုလို့မနက်တစ်ယောက် ညတစ်ယောက် စုစုပေါင်းရယ်မှ ၂ယောက်ထဲတွေ့ ခဲ့ ရပါတယ်။ Receptionist လည်းသူ၊ Bellboy လည်းသူ၊ ယုတ်စွအဆုံး မနက် Breakfast စားတဲ့အခါမှာ Waiter ကလည်း သူဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့။ တမင်ခြောက်ခြားအောင် လူအပိုမခန့် တာလား။ Human Capacity ကို အပြည့်အ၀အသုံးချတာပဲလားတော့ မသိပါဘူး။ လူရှင်းရတဲ့အထဲ ဟိုတယ်ကော်ရစ်ဒါမီးတွေကိုလည်း လူဝင်လာမှ အလိုအလျောက်ပွင့်လာတဲ့ Auto စနစ်ကို သုံးထားတော့ မှောင်မှောင်မဲမဲထဲ မီးတွေ ဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာတာ တကယ်ပဲ ခြောက်ခြားစရာကောင်းပါတယ်။ ဟိုတယ်မှာ ဓာတ်လှေကားလည်း မထားထားတော့ ခရီးပန်းရတဲ့အထဲ ဒုတိယထပ်က အခန်းထဲထိ ကိုယ့်အထုပ်ကိုယ် မနည်းမ သယ်ခဲ့ရတာလည်း မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။
ဟိုတယ်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ၀န်ထမ်း
လေယာဉ်တစ်တန် ကားတစ်တန် ရထားတစ်တန်နဲ့ ပင်ပင်ပန်းပန်း သွားခဲ့ရတဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်ရဲ့ ပထမဆုံးညကို အကျဉ်းခန်းထဲ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မတို့မိသားစုအဖြစ်ကို ပြန်တွေးကြည့်တိုင်း ရယ်ချင်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ပုံမှန်ဟိုတယ်ခန်းတွေက ခွဲထွက်ပြီး ဆန်းကြယ် ခြောက်ခြားဖွယ် အတွေ့ အကြုံတွေပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ Jail Hotel မှာ တည်းခဲ့ရတဲ့ နှစ်ညတာဟာ ကျွန်မရဲ့ခရီးသွားအတွေ့ အကြုံတွေထဲ ဘယ်တော့မှ မေ့မရနိုင်မယ့် အတွေ့ အကြုံသစ်ဖြစ်စေခဲ့တာကတော့ ကျေနပ်စရာပါပဲ။
Lobby မှာထားပေးထားတဲ့ လက်လှည့်ဘောလုံးကစားနည်း။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားနေကြ ကစားနည်းလေးဆိုတော့ ခုလိုမထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာ ပြန်တွေ့ရတာ သိပ်ပျော်တာပေါ့
This entry was posted in Europe, Switzerland, Travel and tagged BizzareHotel, Europe, Experience, Jail, JailHotel, Lucerne, Nu Myat around the World, Switzerland, WierdHotel. Bookmark the permalink.
← The Paradise, Maldives
ကျူးလစ်ပန်းရောင်စုံများပွင့်လန်းရာ နယ်သာလန်ရှိ ပန်းဥယျာဉ်ကြီး →
2 thoughts on “My2days Jail Experience in Switzerland”
Zaw Zaw Myo Lwin says:
လိုတိုရှင်းလေးနဲ့ အတွေ့အကြုံလေးကို ရှဲပေးသွားတာ သိပ်ကောင်း